ငှက်သိုက်ကို မဖျက်စီးချင်လို့ ကားကို စွန့်လိုက်တဲ့ ဒူဘိုင်း အိမ်ရှေ့မင်းသား – အနုပညာရပ်ဝန်း
ငှက်သိုက်ကို မဖျက်စီးချင်လို့ ကားကို စွန့်လိုက်တဲ့ ဒူဘိုင်း အိမ်ရှေ့မင်းသား
ဒူဘိုင်း အိမ် ရှေ့ မင်းသား Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Makt oum က တော့ Fazza လု့ိ လူသိများပြီး တစ်ချိန်မှာ ဘုရင် ဖြစ်လာမယ့် လူပါ။ လက်ရှိ မှာလည်း စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စ တွေကို ဦးဆောင် နေသူပါ။အသက်က တော့ (၃၇)နှစ် ဖြစ်ပြီး (၂၀၁၉) က မှ လက်ထပ် ထားသူပါ။
ကြင်နာ တတ်သူ၊ကူညီ တတ်သူလို့ သတ်မှတ်ခံ ထားရသူပါ။ အိမ် ရှေ့ မင်းသား ရဲ့ ကြင်နာ တတ်တဲ့ အပြု အမူ တစ်ခု က တေ့ာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီး နေပါတ ယ်။ဒီအ ကြောင်းကိုတော့ indiatimes မှာ အခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်
အိမ် ရှေ့ မင်းသားရဲ့ ဇိမ် ခံ ကား ပေါ်မှာ ငှက် က အသိုက် လာ ဖွဲ့ ခဲ့တာပါ။ငှက် စုံ တွဲ အသိုက် ဖွဲ့ ဥဥ ခဲ့ ပြီး ပျော်ရွှွင် ကြည်နူး နေ တဲ့ အသိုက် အမြုံ က တော့ အိမ် ရှေ့ မင်းသား ရဲ့ ကားကြီး ပေါ် မှာပါ။ကားကို သုံးမယ်ဆိုရင် ကားပေါ်မှာ အသိုက် လာဖွဲ့ နေတဲ့ ငှက် သိုက် ကို ဖျက် စီး နှောင့် ယှက် မိသလို ဖြစ်မှာ စိုးတာ ကြောင့် အိမ် ရှေ့ မင်းသားက အဲ့ဒီ ကားကို ငှက် တွေ နေ နေတဲ့ တစ် လျှောက် လုံး လုံး၀ အသုံးမပြု ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ကားကိုပါ အနီရောင် Tape ကပ် ထားလိုက်ပြီး ငှက် လေးတွေ ဘေး ကင်း အောင် ကာကွယ် ပေး ခဲ့ပါတယ်။ဒီ အ ကြောင်းကိုတော့ သူ့ရဲ့ IG မှာ ဗီဒီယိုဖိုင် နဲ့ အတူ ဝေမျှ ပေး ခဲ့ပါတယ်။ အသိုက် လာ ဖွဲ့ တာ က နေ ဥဥ တဲ့ အထိ သေချာ လေး ရိုက်ထားတာပါ။ဗီဒီယိုဖိုင် အဆုံးမှာတော့ အ မေ ငှက်မ ကြီးက အ ကောင် ပေါက် လေးတွေ ကို စောင့် ရှောက် နေတာ ပါ ပါပါတယ်။အိမ် ရှေ့ မင်းသား ရဲ့ ကြင်နာ တတ်တဲ့ စိတ်ထားကို တော့ အားလုံး က ဝိုင်းပြီး ချီးကျူး ခဲ့ ကြပါတယ်
Sheikh Hamdan captures newly hatched chicks on his Mercedes SUVWhen the Dubai Crown Prince spotted the nest on his SUV last week, he decided to keep the vehicle parked so as not to disturb the bird that was then sitting on its eggs. He also cordoned it off to prevent anyone or any car from getting too close. It wasagesture that won hearts online, with netizens thanking the him for protecting the bird.
Posted by Dubai on Thursday, August 13, 2020
ဒူဘိုင်း အိမ် ရှေ့ မင်းသား Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Makt oum က တော့ Fazza လို့ လူသိများ ပြီး တစ်ချိန်မှာ ဘုရင် ဖြစ်လာ မယ့် လူပါ။ လက်ရှိ မှာလည်း စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စ တွေကို ဦးဆောင် နေသူပါ။ အသက်က တော့ (၃၇)နှစ် ဖြစ်ပြီး (၂၀၁၉) က မှ လက်ထပ် ထားသူပါ။ကြင်နာ တတ် သူ၊ကူညီ တတ်သူလို့ သတ်မှတ်ခံ ထားရသူပါ။ အိမ် ရှေ့ မင်းသား ရဲ့ ကြင်နာ တတ်တဲ့ အပြု အမူ တစ်ခု က တေ့ာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီး နေပါတ ယ်။ဒီအ ကြောင်းကိုတော့ indiatimes မှာ အခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။
အိမ် ရှေ့ မင်းသားရဲ့ ဇိမ် ခံ ကား ပေါ်မှာ ငှက် က အသိုက် လာ ဖွဲ့ ခဲ့တာပါ။ ငှက် စုံ တွဲ အသိုက် ဖွဲ့ ဥဥ ခဲ့ ပြီး ပျော်ရွွှင် ကြည်နူး နေ တဲ့ အသိုက် အမြုံ က တော့ အိမ် ရှေ့ မင်းသား ရဲ့ ကားကြီး ပေါ် မှာပါ။ကားကို သုံးမယ် ဆိုရင် ကားပေါ်မှာ အသိုက် လာဖွဲ့ နေတဲ့ ငှက် သိုက် ကို ဖျက် စီး နှောင့် ယှက် မိသလို ဖြစ်မှာ စိုးတာ ကြောင့် အိမ် ရှေ့ မင်းသားက အဲ့ဒီ ကားကို ငှက် တွေ နေ နေတဲ့ တစ် လျှောက် လုံး လုံးဝ အသုံးမပြု ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ကားကိုပါ အနီရောင် Tape ကပ် ထားလိုက်ပြီး ငှက် လေးတွေ ဘေး ကင်း အောင် ကာကွယ် ပေး ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ အ ကြောင်းကိုတော့ သူ့ရဲ့ IG မှာ ဗီဒီယိုဖိုင် နဲ့ အတူ ဝေမျှ ပေး ခဲ့ပါတယ်။ အသိုက် လာ ဖွဲ့ တာ က နေ ဥဥ တဲ့ အထိ သေချာ လေး ရိုက်ထားတာပါ။ ဗီဒီယိုဖိုင် အဆုံးမှာတော့ အ မေ ငှက်မ ကြီးက အ ကောင် ပေါက် လေးတွေ ကို စောင့် ရှောက် နေတာ ပါ ပါပါတယ်။အိမ် ရှေ့ မင်းသား ရဲ့ ကြင်နာ တတ်တဲ့ စိတ်ထားကို တော့ အားလုံး က ဝိုင်းပြီး ချီးကျူး ခဲ့ ကြပါတယ်။
သင်ဖုန်းကိုင်တဲ့ပုံစံမှပြောသော သင့်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား..
နေပူထဲမှာ PPE ဝတ်စုံအပြည့်နဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ သူနာပြုတွေရဲ့ ဝတ်စုံထဲမှချွေးရည်များ သွန်ချနေရတဲ့ ရုပ်သံ